China CY-2 (Yakajairika yekunze kusunda-dhonza hembe hanger) vagadziri uye vanotengesa | Jialong
Yakagadzikana, yakachengeteka, yakasimba
Kurema kwematanda matatu 0.67kg 0.84kg 1.26kg 1.68kg 2.1kg 1.34kg
Kurema kwematanda mana 0.89kg 1.12kg 1.68kg 2.24kg 2.8kg 1.67kg
(Kukora kweiyo chubhu ndiko 1.0 mm)
Pipe Wall Ukobvu
Mamirire:Uchishandisa zvigadzirwa zvekunze, tekinoroji yepamusoro, kugadzirwa kwakanaka, mushure mekurapa pombi ine yakasimba anti-corrosion performance, oxidation kuramba, mota giredhi pamusoro kurapwa. Super gobvu pasi, mushure mekuisirwa, bracket iri rakadzikama uye rakasimba, iyo pole inosunda uye kudhonza zvakanyanya mushe, uye iyo willow chipikiri kutakura-kutakura kwakasimba Dhizaini dhizaini inogadzirawo inoita kuti chigadzirwa chiwedzere kunaka.
Gadza:Yemahara nhare yekumisikidza, chero bedzi paine poindi yakatarwa, bracket inogona kugadziridzwa mukati mehurefu hwepondo.
Basics:Kana isu tichirongedza zvigadzirwa zvedu, isu tinozozvipakata uye nekuzvipatsanura kuti tione kuti dzinogona kuendeswa kwauri mune yakanaka mamiriro.Zvechokwadi, isu zvakare tichazopa mamwe ekuwedzera mativi kudzivirira kukanganisa nekushaikwa kwezvikamu. Tichadzorerazve zvigadzirwa zvakakuvara nguva inotevera. Dambudziko rekumisikidza, isu tichava neyakadzama yekuisa dzidziso. Kana zvichidikanwa, tinogona kuronga mumiriri wemuno kuti aise pane saiti.
Kune vatengi vazhinji vanozosarudza zvigadzirwa zvedu. Isu tinogadzira mamirioni ezvigadzirwa gore rega. Tinogona kuvimbisa mhando tichiona huwandu. Chiyero chehunyanzvi chinosvika pa98%, uye isu tichaita zvese zvakadzama uye zvigadzirwa zvese nemoyo wedu.
Mhinduro:Vamwe vatengi vanogona kunge vaine mamwe mazano ekugadzirisa iyo hanger. Tinogona kupa dzimwe mhinduro zvinoenderana nemafungiro evatengi, kusanganisira huwandu hwemakomba, iwo maitiro eruvara rwechishongedzo, uye zvimwe zvinhu.
Nyaya:Semuenzaniso, mune chigadzirwa chakatumirwa kuVietnam, mutengi akatikumbira kuti tiomese hembe dzakawanda sezvinobvira pasi pemamiriro ekuti pombi yaingova 80cm chete. Mushure mekudzokororwa bvunzo, takaboora maburi gumi nemaviri padanda kugadzirisa dambudziko rekuti danda rakanga rakapfupika kuti riomese mbatya.
Pashure: CY-3 (zvakajairika zvekunze kusunda-kudhonza hembe hanger)
Zvadaro: CY-1 (Zvakajairika panze kusunda-dhonza hembe hanger)